Wasiirka Difaaca oo la weydiiyey inay Ciidamada Mareykanka Dib loogu celinayo Soomaaliya..? - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Lloyd Austin ayaa wareysi uu siiyay VOA-da ayaa wax laga weydiiyay howlagallada argagixiso la dirirka ee Maraykanku uu ka wado dalalka dunida, iyo haddii Maraykanku uu mar kale ciidamo u dirayo Soomaaliya?.
Wuxuu sheegay inuusan dooneynin inuu shaaciyo ciidamo meel loo dirayo, laakiin wuxuu Caddeeyay inay Soomaaliya ka jirto dhaqdhaqaaq argagixiso ah, iyadoo dalalka burburka dowladnimo ka jiro ama dowladoodu jilicsan tahay ay argagixisada ku xoogeystaan.
Wuxuu soo hadal Afrika oo ay ka jiraan ururro argagixso oo ka howlgala, sida Soomaaliya oo lagu arkayo dhaqdhaqaaqyada argagxisada, laakiin aanu diyaar u ahayn inuu faahfaahin kale bixiyo.
Maamulkii madaxweyne Joe Biden ayaa Soomaaliya ka saaray ciidamadii Mareykanka ee tiradooda lagu sheegay 500 askari, kuwaasoo ka howlgalayay bartamaha iyo Koonfurta Soomaaliya, kuwaasoo la geeyay dalalka Krenya iyo Jabuuti.
Previous articleJabhada Tigray oo dib u qabsaday magaalooyin iyo degaano ka tirsan Is-maamulka Amxaarada
Next articleRW Rooble oo ka hadlay khilaafka kala dhaxeeya Farmaajo. “Kiis Ikraan Tahliil wuxuu noqday arrin Qaran”